Emergency Support for Labors (Doe Lote Thar) - The Fifth Pillar
Emergency Support for Labors (Doe Lote Thar)
May 18, 2020 July 1, 2020 admin	0 Comments
Emergency Support for Labors program (Doe Lote Thar) is intended to provide pregnant and unhealthy women who worked at garment, bag and shoe factories and income affected due to COVID-19 crisis. The program will provide 144,000 MMK ($104.976) for each of eligible women and application can be available from today.
The supports will be transferred through Wave Money. And therefore, the applicants need to submit the correct mobile phone numbers. (Thanking goes to Wave Money for zero service charges).
This supporting program will be implementing from May to July 2020. The program is funded by Red Carpet Green Dress https://www.rcgdglobal.com/ , implemented by The Fifth Pillar and Fair Wear https://www.fairwear.org/ .
For more detailed information, please see below and call 09428216702 / 09965052466 at anytime in office hours. Up to date information of TFP is available at this website and The Fifth Pillar Facebook Page https://www.facebook.com/TheFifthPillar.tfp as well.
“ဒို့လုပ်သား” အရေးပေါ် ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးခြင်း”
အထည်ချုပ်စက်ရုံ၊ အိတ်စက်ရုံ၊ ဖိနပ်စက်ရုံများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် အလုပ်အကိုင်ထိခိုက်သွားသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ၊ ကျန်မာရေးမကောင်းမွန်သည့် အမျိုးသမီးများကို ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
▪️ ဖော်ပြထားသည့် အခြေအနေများနှင့် အကျုံးဝင်သည့်အမျိုးသမီးများကို တစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၁၄၄,၀၀၀ ကျပ်စီ ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ပြီး ယနေ့မှစ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
▪️ ပံ့ပိုးငွေများကို Wave Money မှတဆင့် ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည့်အတွက် လျှောက်ထားသူများအနေဖြင့် လက်ရှိကိုင်တွယ်နေသည့် ဖုန်းနံပါတ်အမှန်ကို ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
(Wave Money မှ ငွေလွဲခမယူပဲ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။)
▪️ “ဒို့လုပ်သား” အရေးပေါ် ရန်ပုံငွေ ပံ့ပိုးခြင်း အစီစဉ်ကို မေလမှ ဇူလှိုင်လအတွင်း လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် The Fifth Pillar နှင့် Fair Wear အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး Red Carpet Green Dress အဖွဲ့မှ ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
▪️ အသေးစိပ်အချက်အလက်များကို အောက်တွင် ဖတ်ရှု့နိုင်ပြီး အရှင်းလင်းသည့် အချက်များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဖုန်း – 09428216702 / 09965052466
← Youth&Politics Training (Batch-8)
Legal Education on anti-human trafficking Book →